Vikram Samvat. Ny Vikram Samvat na Tetiandro Vikramy dia tet
ⓘ Vikram Samvat. Ny Vikram Samvat na Tetiandro Vikramy dia tetiandro ara-tantara hindo, manara-bolana sy masoandro, nampiasaina ao aminny zana-kontinenta indiana. ..
Ankehitriny ny pejy mikasika ny taona 2013 ao aminny Kalandrie gregoriana Ny taona 2013 nanomboka taminny andro Fahatelo. Izany dia any aminny faha-13 taona ny taonarivo faha-3 sy faha-3 taona ny folo taona 2010. Farany, dia ny 2013ο taona ny Kristianina Tetiandro. Ny taona 2013 dia nanambara toy ny taona Constantin Cavafy. Koa izany no heverina araka ny Taona ny Bibilava araka ny kalandrie sinoa.
Io pejy io mifandray aminny taona 2019 ao aminny Kalandrie gregoriana Ny taona 2019 dia manomboka aminny andro talata. Izany no faha-19 taona ny taonarivo faha-3 sy faha-9 taona ny folo taona 2010. Farany dia ho aminny 2019ο taona ny Kristianina Tetiandro.
ⓘ Vikram Samvat
Ny Vikram Samvat na Tetiandro Vikramy dia tetiandro ara-tantara hindo, manara-bolana sy masoandro, nampiasaina ao aminny zana-kontinenta indiana. Io no tetiandro ôfisialin i Nepaly. Ampiasaina ao aminny fanjakana maro ao India ity tetiandro ity.
Ireto ny anaram-bolana ao aminio tetiandro ioː
Wikipedia: Vikram Samvat